15 Easy Crafts Kune Vana | Crafts On
15 Easy Crafts Yevana
Isabel Catalan | 05/10/2021 09:00 | Crafts, Mhizha yevana
Ko ivo vana vadiki vanofinhwa kumba uye havazive zvekuita kuti vafare? Mune inotevera posvo iwe uchawana 15 mhizha dziri nyore dzevana izvo zvinogadzirwa mujiffy uye nazvo zvavanogona kuve nekunakidzwa kwakawanda zvese mukugadzirwa kwekugadzira uye gare gare, pavanopedza hunyanzvi uye vanogona kutamba nawo.
Kuti ugadzire hunyanzvi uhu haufanire kutenga zvinhu zvakawanda. Muchokwadi, kana iwe uri mafeni ezvehunyanzvi, iwe uchave uine akati wandei pamba kubva pazviitiko zvakapfuura, kunyangwe iwe uchikwanisa kutora mukana wezvinhu zvakadzokororwa kuti uzviite. Usapotsa!
1 Rakareruka gamba nemiti yezvigadzirwa uye kadhibhodhi
2 Yainzwa pikicha yevana
3 Chiratidzo chegonhi chiine meseji
4 Kisimusi reindeer chishongo chekuita nevana
5 Kudzokorora zvishandiso zveKisimusi. Snowman
6 Kadhibhodhi hozhwa yekuita nevana
7 Nyore piggy bank rekudzokorora bhodhoro remukaka weupfu kana zvakafanana
8 Maumbirwo ejometri kudhinda, akagadzirwa nemipumburu yemapepa etoilet
9 Kadhibhodhi uye pepa pepepuru butterfly
10 Penzura yevarongi yehari yevana
11 Masaga ejira ekuzora makabati
12 Yakashongedzwa slippers yezhizha
13 Matoyi akadzokororwazve: nyere
14 Penzura muchengeti katsi
15 Hoops mutambo
Pakati pezvigadzirwa zviri nyore zvevana unogona kuwana izvi zviri nyore gamba rakagadzirwa nematanda uye makadhibhokisi. Zvishandiso iwe zvauchazoda ndeye popsicle tsvimbo, kadhibhodhi, uye ine mucherechedzo weruvara.
Chinhu chakanaka pamusoro penyanzvi iyi ndechekuti iwe unogona kuzviita mumaminetsi mashoma uye ipapo vana vanozogona kutamba nayo. Uye zvakare, inogona kuve yakasarudzika nekusarudza iwo mavara uye kunyangwe tsamba yeiyo gamba ine yekutanga kwezita remwana, semuenzaniso.
Kana iwe uchida kuziva kuti ungazviita sei, usapotsa iyo posvo gamba rakagadzirwa nematanda uye makadhibhokisi.
Mumwe wemitambo yavanofarira yevana yekunakidzwa ipuzzle, kubva padiki kusvika kune akaomesesa. Iwo mapuzzle akagadzirwa nemicheka yakadai senge anonzwa akakwana kushanda pahunyanzvi hwemotokari nemanzwiro, zvinova zvakafanira kuti vana vakudziridze kugona kwavo kwekuziva uye kwemuviri.
Uyewo, ichi chirahwe chiri nyore kugadzira uye iwe unogona kugadzira mhando dzese dzemifananidzo dzekushongedza nadzo. Iwe uchazoda akanzwa machira, shinda yekushongedza, gobvu tsono uye yekunamatira velcro, pakati pevamwe.
Kana iwe uchida kudzidza kuzviita nhanho nhanho, ona iyo posvo Yainzwa pikicha yevana.
Chiratidzo chegonhi chiine meseji
Iyi ndeimwe yehunyanzvi hwakareruka hwevana iwe hwaunogona kuita nezvinhu zvishoma zvishoma zvaunenge uinazvo kumba zvakaita semakadhibhokisi emavara, pepa rekepisi, chigero, glue nemaki.
Nese maturusi aya unogona kugadzira izvi akarembera chiratidzo chemashoko pamaburi emakamuri eimba. Iwe unoda kuziva kuti ungazviita sei? Tarisa uone iyo posvo Chiratidzo chegonhi chiine meseji.
Kisimusi reindeer chishongo chekuita nevana
Pamusoro pekuva imwe yehunyanzvi hwakareruka hwevana, iri zvakare imwe yeanonyanya kuita sezvo ichigona kushandiswa se Krisimasi muti chishongo kana sekadhi rekukwazisa kune mumwe munhu akakosha pamazuva aya.
Izvo zviri nyore zvekuti kunyangwe chidiki chemhuri chinokwanisa kutora chikamu mukugadzirira kwayo. Kuti uzviite unongoda chidimbu chekadhibhodhi, penzura, mucherechedzo mutema, mamwe mabhora ane mavara nezvimwe zvinhu zvaunogona kuona mune posvo Kisimusi reindeer chishongo chekuita nevana.
Kudzokorora zvishandiso zveKisimusi. Snowman
Imwe yeanotonhorera akareruka emhizha evana uye akajairika echinyorwa cheKisimusi chaungaite is a kadhibhodhi snowman.
Iwe unozoda mamwe mapepa asina chinhu, furo rabha, pom poms, akanzwa, mamaki, uye zvimwe zvishoma zvigadzirwa. Mhedzisiro yacho yakanaka kwazvo, kungave yekushongedza kamuri yevana kana kuishandisa setoyi yekutandadza ivo kwechinguva.
Kana iwe uchida kuona ese matanho ekuti ungazviita sei, usapotsa iyo posvo Kudzokorora Zvigadzirwa zveKisimusi: Snowman. Zvichataridzika zvakanaka pauri!
Kadhibhodhi hozhwa yekuita nevana
Iyi hozhwa idiki ndeimwe yeanokurumidza nyore mbichana hunyanzvi hwekuita. Izvo zvakanaka kune vadiki kuti vadzidze kuita hunyanzvi vari vega uye kuve nenguva inonakidza yekuvandudza kwavo kufunga.
Chinhu chikuru chekugadzira hozhwa iyi makadhibhokisi. Chokwadi une vakawanda kumba! Iwe unoda kuona kuti ungazviita sei? Mune iyo posvo Kadhibhodhi hozhwa yekuita nevana iwe uchawana maitiro ese.
Nyore piggy bank rekudzokorora bhodhoro remukaka weupfu kana zvakafanana
Zvino zvatanga gore idzva inguva yakanaka yekudzidzisa vana kusevha mari yavo kuitira kuti vatenge matetiki netoyi gore rese.
Nzira inonakidza yekuzviita ndeyokugadzira izvi piggy bank ine bhodhoro remukaka weupfu wakadzokororwa. Iyo ndeimwe yehunyanzvi hwakareruka hwevana hwauchazoda zvishandiso zvishoma: chikepe, shinda shoma, mucheki uye inopisa silicone.
Kana iwe uchida kuziva iyo yekugadzira nzira yeiyi piggy bank, usarasikirwa nepositi Nyore piggy bank rekudzokorodza mukaka hupfu mhando inogona.
Maumbirwo ejometri kudhinda, akagadzirwa nemipumburu yemapepa etoilet
Iwe unoda here kubatsira vadiki kushongedza yavo yechikoro zvigadzirwa mune inonakidza uye yekutanga nzira? Wobva watarisa pane iyo posvo Maumbirwo eGeometric ekudhinda nemapepa emuchimbuzi nekuti ndeimwe yehunyanzvi hwakareruka hwevana iwe hwaunogona kuita nekupenya uine zvishoma zvigadzirwa zvaunazvo kumba. Iwe unongoda chete mamaki, mamwe mapepa emuchimbuzi makatoni uye mamwe mabhuku ekunyorera.
Kadhibhodhi uye pepa pepepuru butterfly
Imwe yehunyanzvi hwakareruka hwevana iwe hwaunogona kuita nekadhibhodhi kadiki, pepa rekunyora, mamaki uye glue ndeichi kadhibhodhi uye crepe bepa shavishavi nakisa kupora. Hazvitore nguva yakareba kuti uzviite uye ipapo ipapo unenge uine chishongo chidiki chekushongedza nacho imba yevana.
Kuziva maitiro ekuzviita tarisa pambiru Kadhibhodhi uye crepe bepa shavishavi kwazvinouya zvakanyatsotsanangurwa nhanho nhanho.
Penzura yevarongi yehari yevana
Vana vanowanzo kuunganidza huwandu hwakawanda hwemakrayoni, mapenzura uye mamaki ekupenda izvo pakupedzisira zvinogara zvichipota zvichitenderera imba. Kudzivirira kuti vasarasike uye kuve nemifananidzo yese munzvimbo imwechete, edza kuita izvi vana penzura murongi poto.
Heano mamwe emabasa anonakidza uye ane mavara akareruka evana kuti vaite. Uye zvakare, izvo zvinokutendera iwe kuti udzorezve zvinhu zvauinazvo kumba pachinzvimbo chekuzvirasa.
Kana iwe uchida kuziva maitiro ekugadzira iyi hunyanzvi, usapotsa iyo posvo vana penzura murongi poto.
Masaga ejira ekuzora makabati
Izvi machira masaga ekuzora makabati Iyo ndeimwe yehunyanzvi hwakareruka hwevana iyo, pamusoro pekupa vadiki nguva yakanaka, inozoshandawo semhepo yakasununguka yekuzorodza mbatya, izvo zvinodzivirira mbatya kubva mukunhuhwirira uye hunyoro.
Iwo ane mavara, anoshanda uye akakwana kune zvipo. Mumasikati mamwe chete iwe unogona kugadzira akati wandei nejira shoma, maruva akaomeswa uye musimboti we lavender kana sinamoni. Kuti uzive zvimwe zvese zvigadzirwa zvekugadzira ichi hunyanzvi, ndinokurudzira kuti uverenge chinyorwa Masaga ejira ekuzora makabati. Zvichava zvinofadza kuvhura makabati!
Yakashongedzwa slippers yezhizha
Shongedza mamwe machena mateki ane mamaki ndeimwe yeakanakisa emhizha ari nyore evana aunogona kuita. Iwe unogona kubatsira vadiki kuti vagadzire iwo madhizaini eakareruka dhizaini. Iwe unongoda chete mabheti uye maviri matsvuku uye egirini machira.
Iwe unogona kugadzira dhizaini yema cherries kana kushandisa yako yekufungidzira uye kupenda iyo yaunoda zvakanyanya. Mune iyo posvo Yakashongedzwa slippers yezhizha iwe uchawana vhidhiyo yekudzokorora hunyanzvi uhu. Usapotsa!
Matoyi akadzokororwazve: nyere
Dzimwe nguva matoyi akareruka ndeaya anonyanya kudiwa nevana kunakidzwa nekunakidzwa. Ndiyo mamiriro eiyo Mashiripiti nyere, Imwe yehunyanzvi hwakareruka hwevana iwe hwaunogona kuita mumaminetsi mashoma.
Kugadzira toy iyi unogona kushandisa zvishandiso zvekare zvauinazvo kumba sevamwe mashanga kana mashanga kunwa soda. Uye kana usina, unogona kuzviwana mune chero supamaketi.
Kunze kwemashanga iwe unozodawo imwe tepi kana tepi. Imwe sarudzo iglue, asi kana uchikwanisa kusarudza tepi ndinoikurudzira nekuti ichave iri nani, nyore kuita uye kunyange yakachengeteka. Sezvauri kuona, iwe unongoda akati wandei zvinhu!
Penzura muchengeti katsi
Kana iwe uchida kudzokororazve, imwe yeakareruka hunyanzvi hwevana iwe aunogona kuita ndeiyi penzura muchengeti katsi nemakadhibhokisi rolls echimbuzi pepa iwe yaunayo kumba. Kune vamwe vese, hauzodi zvimwe zvakawanda zvekushandisa kunze kwemamwe mamaki, chigero, gundi uye mamwe maziso ehunyanzvi.
Kana iwe uchida kuziva kuti ungaite sei ino yakanaka katsi nhanho nhanho, usapotse iyo posvo Penzura muchengeti katsi.
Este Seti yezvindori Icho chimwe cheyakareruka hunyanzvi hwevana iwe hwaunogona kugadzira nezvinhu zvauinazvo kumba. Kadhibhodhi diki, kadhibhodhi mupepa wekicheni, mamaki uye glue zvinokwana kuita uyu mutambo unonakidza waungatambe nawo mimwe mitambo mukati kana kunze kwemusha.
Iwe ungade here kuziva kuti ino seti yemhete inogadzirwa sei? Tarisa uone iyo posvo Seti yezvindori kwaungawana mirairo yakadzama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Mhizha yevana » 15 Easy Crafts Yevana
4 mazano ekushongedza dzimba dzedu paHalloween